Diary baolina kitra alemana - tantaram-pianakaviana misy ankehitriny sy kintana Classic
Tongasoa ato amin'ny baolina kitra alemana alemana momba ny tantaram-pianakaviana Plus Untold Biographie Tatitry ny kintan'ny baolina kitra Allemana ankehitriny. Eto izahay dia namela ny mpamaky, ny fahombiazan'ny kintan'ny baolina kitra amin'izao fotoana izao sy ny karajia izay nanosika ny lalao baolina kitra ho an'ny baolina kitra.
Tsy isalasalana fa i Alemana dia nanao baolina kitra ary mpirehareha ny mpankafy azy. Ny mpilalao ankehitriny sy malaza dia mendrika ny ho ao amin'ny Football Weekend of Fame.
LifeBogger dia nanolo-tena hitondrany ny mpamaky azy manontolo, kaonty feno hetsika mahatalanjona sy zava-misy avy amin'ireo fotoana mpilalao baolina kitra hatramin'izao. Ny analizy dia mirakitra ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana, ny fifandraisan'ny fiainana, ny adihevitra ary ny antony maro tsy fantatra momba azy ireo momba ny OFF sy ON-Pitch.
Eny, maro tamin'ireo mpankafy baolina kitra no namaky betsaka momba ny fahaiza-manaony. Nefa vitsy ihany no nandinika ny tantaram-piainany sy ny tantaran'ny fahazazany izay tena mahaliana. Amin'izao fotoana izao tsy misy adieu intsony, amin'izao fotoana izao tsy misy adieu intsony, nokasainay ny sary nalainay sy ny votoatiny ho anao amin'ny voninahitra rehetra.
vannyhenrico - Jona 5, 2019 0
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny lalao baolina kitra malaza antsoina hoe "Havertz". Ny Kai Havertz tantaran-tantaran'olon-tsy fantatra momba ny tantaram-piainana tsy hita isa dia mitondra ...
vannyhenrico - March 2, 2019 0
Ny LB dia manolotra ny rakitsoratra feno momba ny sariitatry ny baolina kitra iray izay malaza amin'ny anaram-bosotra; "Jimmy". Ny Joel Matip tantara an-tsehatra momba ny tantaram-pianakaviana misimisy kokoa ...
Thilo Kehrer tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pahaterahana bebe kokoa
vannyhenrico - Febroary 20, 2019 1
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny "football genius" izay fantatra amin'ny anarana hoe "Sweeper". Our Thilo Kehrer Childhood Story plus Untold ...
vannyhenrico - Febroary 17, 2019 0
Ny LB dia manolotra ny tatitra feno momba ny mpilalao baolina kitra izay fantatra indrindra amin'ny anaram-bosotra hoe "The Professor". Ny Thomas Tuchel Childhood Story plus ...
vannyhenrico - Desambra 24, 2018 0
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny lalao baolina kitra izay fantatra amin'ny anarana hoe "Fashion Icon". Ny tantaran'i Serge Gnabry Childhood plus Untold ...
vannyhenrico - Desambra 20, 2018 0
Ny LB dia manolotra ny rakitsoratra feno momba ny lalao baolina kitra izay fantatra amin'ny anarana hoe "Leon". Ny tantaran'i Leon Goretzka tantaram-pahaterahana sy ny zava-misy marina momba ny tantaram-piainana dia mitondra ...
vannyhenrico - Desambra 12, 2018 0
Ny LB dia manolotra ny rakitsoratra feno momba ny lalao baolina kitra iray izay fantatra amin'ny anarana hoe "Niki". Ny tantaran'i Niklas Sule Childhood plus Untold ...
vannyhenrico - Desambra 9, 2018 0
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny "football genius" izay fantatra amin'ny anarana hoe "Penalty Killer". Ny Bernd Leno Childhood Story plus ...
vannyhenrico - Novambra 10, 2018 0
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny "football genius" iray fantatra amin'ny anarana hoe "Smiley Donny". Ny Shkodran Mustafi tantara an-tsaratsara bebe kokoa sy tsy misy ...
Andre Schurrle tantaram-pitiavana momba ny tantaram-pitiavam-bazana mbola tsy fantatra
vannyhenrico - Jolay 28, 2018 0
Ny LB dia manolotra ny rakitsoratra feno momba ny "football genius" izay fantatra fotsiny amin'ny anarana; "Andre". Ny tantaram-pitiavan'i Andre Schurrle momba ny tantaram-pahaterahana sy ny tantaram-piainana tsy hita isa ...
1234Page 1 ny 4